Browser မသုံးဘဲ Youtube က videos ကြည့်မယ် | အိမ့်မှူးသော်
ဒီတစ်ခါတော့ ရှားရှားပါးပါးလေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက Desktop ပေါ်ကနေပဲ youtube က သီချင်းတွေ ၊ ဗွီဒီယိုတွေကို မည့်သည့် Browser မှ မလိုပဲ ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာ။ တစ်ခုရှိတာက မြန်မာလို search box မှာ ရိုက်လို့မရဘူး ။ အတုံးတုံးတွေနဲ့ ပဲ ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေ့မယ့် အဲဒီအတုံးတုံးတွေကို ကိုယ်က လက်ကွက်အလွတ်ရတယ်ဆိုရင် ရိုက်သာချလိုက် ပေါ်လာလိမ့်။ နမူနာပုံလေးပြမယ်ဗျာ။ စိတ်ဝင်စားရင်အောက်မှာ အသုံးပြုနည်း ပြောပြထားပါတယ်။ Desktop ပေါ်မှာ ဒီလိုလေးပေါ့။
အသုံးပြုနည်းက ပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးကို install လုပ်လိုက်ပါ။ လုပ်ပြီး ရင်အောက်ကပုံလေးလိုပေါ်လာပါ့မယ်။ Next ကို ကလစ်ပေးပါ။
ပြီးရင် အကောင့်တစ်ခုလုပ်ခိုင်းပါလ်ိမ့်မယ်။ ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်။ နာမည်လေးနဲ့ ပတ်ဝက်စ်လေး ဖြည့်ယုံပဲ။ ဖြည့်ပြီးရင် Finish ပေးပါ။
ဒါဆိုရင်သုံးလို့ရပါပြီး ။ အောက်ကပုံစံပေါ်လာပြီဆိုရင် အနီနဲ့ ပြထားတဲ့ နေရာတစ်ခုခုကို နှိပ်ပြီး သီချင်း ရှာလို့ရပါပြီ။
To download >>Mediafire
simplelife 6:31 PM
Hello! your link is death. There is nothing.
mhuthawေ၇ လင့်သေသွားပြီ.... အားရင်ပြန်တင်ပေးပါအုံး.... ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ